မုန်တိုင်း MAHASEN နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်မည် « MMWeather Information BLOG
« မုန်တိုင်း MAHASEN ၏ တိမ်တိုက်များ ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ MAHASEN ၏ လမ်းကြောင်း-Landfall-path တောင်ဘက်သို့ ၄၅ မိုင်ခန့် ကျဆင်းလာ »
By mmweather.ygn, on May 15th, 2013
နောက်ဆုံးရရှိသည့် JTWC နှင့် NRL data များ၌ မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းမှာ မြောက်ဘက်သို့ အနည်းငယ်(၁၃မိုင်ခန့်) ရွေ့သွားပြီး မုန်တိုင်း၏ဗဟိုသည် မေလ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈း၃ဝ နာရီ ခန့်တွင် စစ်တကောင်းမြို့၏ တောင်ဘက် ၁၉ မိုင်ခန့်အကွာမှ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ မုန်တိုင်းကမ်းခြေသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ် မုန်တိုင်း အရွယ်အစား အချင်းမိုင် ၁၄ဝ ခန့်ရှိပြီး လေတိုက်နှုန်း ၄၅ နော်တီကယ်မိုင်(တစ်နာရီ မိုင် ၅ဝ ခန့်) ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
စစ်တကောင်းမြို့အနီးကမ်းခြေအား မုန်တိုင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည့် နေရာသည် မြန်မာနိုင်ငံ မောင်တောမြို့ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၉ဝ ကျော်ခန့် ကွာဝေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များအရ မောင်တောမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့တို့သည် မုန်တိုင်းစက်ကွင်း ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိသွားပြီး မုန်တိုင်းတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်စဉ် မုန်တိုင်း၏ဗဟိုတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု အခြေအနေမှာ တစ်နာရီ မိုင် ၅ဝ ခန့် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၁၂ ပေခန့် ရှိမည်ဟု သိရပါသည်။
JTWC အချက်အလက်များအရ မုန်တိုင်းသည် ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ မဏိပူရပြည်နယ်တို့အား ဖြတ်သန်းပြီး မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ် မိုရေးမြို့အနီးမှတစ်ဆင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်းအား ချင်းတွင်းမြစ်တစ်လျှောက် အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားလျှက် မေလ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈း၃ဝ နာရီခန့်တွင် ထမံသီမြို့အနီးအထိ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းနေရာသို့ ရောက်ရှိချိန်၌ ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်း(သို့မဟုတ်)လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်သည့် မုန်တိုင်း MAHASEN သည် လေတိုက်နှုန်း ၂ဝ နော်တီကယ်မိုင်(တစ်နာရီ ၂၃ မိုင်ခန့်)ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
JTWC မှ နောက်ဆုံး ရရှသည့် warning အမှတ် 22 မှ ကောက်နှုတ်ချက်
151500Z POSITION NEAR 18.9N 88.8E.
TROPICAL CYCLONE 01B (MAHASEN), LOCATED APPROXIMATELY 246 NM SOUTHWARD OF KOLKATA, INDIA, HAS TRACKED NORTH-NORTHEASTWARD AT 12 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS.
ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY INDICATES THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) REMAINS UNDER AN AREA OF DEEP CONVECTION, BUT IS DIFFICULT TO IDENTIFY AS THE ORGANIZATION OF THE CONVECTION REMAINS POORLY DEFINED. A SERIES OF SCATTEROMETRY PASSES AT 150333Z, 150419Z, AND 150629Z SUPPORT 35 TO 40 KNOT WINDS NEAR THE CENTER OF THE LLCC. THE CURRENT INTENSITY HAS BEEN MAINTAINED AT 45 KNOTS BASED ON DVORAK ESTIMATES FROM KNES AND PGTW AND THE PERSISTENT CONVECTION OVER THE LLCC. UPPER LEVEL ANALYSIS INDICATES AN ANTICYCLONE TO THE EAST OF THE SYSTEM CONTINUES TO MOVE INTO BETTER VERTICAL ALIGNMENT WITH THE LLCC, LEADING TO A DECREASE IN VERTICAL WIND SHEAR (VWS) TO LOW LEVELS (10 KNOTS). THE STORM IS FORECAST TO TRACK NORTHEASTWARD ALONG THE POLEWARD ORIENTED SUBTROPICAL RIDGE UNTIL WESTERLY FLOW ADVECTS THE SYSTEM OVERLAND. A SLIGHT INTENSIFICATION OVER THE NEXT 12 HOURS IS EXPECTED AS THE LLCC REMAINS IN A LOW VWS ENVIRONMENT, BUT DUE TO THE TRACK SPEED AND PROXIMITY TO THE COAST OF BANGLADESH, THIS INCREASE WILL BE SHORT-LIVED. DISSIPATION IS EXPECTED TO BEGIN UPON MAKING LANDFALL AROUND TAU 24 AND WILL BE FULLY DISSIPATED BY TAU 36. DYNAMICAL MODEL GUIDANCE IS IN TIGHT AGREEMENT, LEADING THE JTWC FORECAST TO BE POSITIONED CLOSE TO THE MULTI-MODEL CONSENSUS WITH HIGH CONFIDENCE. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 151200Z IS 12 FEET.
မေလ ၁၅ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၂၁ဝဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် JTWC သတင်းအချက်အလက်များမှ ပုံဖေါ်ရရှိသော မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက် မြေပုံ(အပေါ်)
မေလ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈း၃ဝ နာရီ(မေလ ၁၅ ရက် ညနေ ၁၈း၃ဝ နာရီမှ လာမည့် ၂၄ နာရီတွင်) မုန်တိုင်းကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်စဉ်
မုန်တိုင်း လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ (Tropical Strong Wind Probabiity – TSR) (အောက်ပုံ)
TSR-ALERT, မုန်တိုင်းသတင်း 01B, MAHASEN, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် « မုန်တိုင်း MAHASEN ၏ တိမ်တိုက်များ ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ MAHASEN ၏ လမ်းကြောင်း-Landfall-path တောင်ဘက်သို့ ၄၅ မိုင်ခန့် ကျဆင်းလာ »
« မုန်တိုင်း MAHASEN ၏ တိမ်တိုက်များ ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ MAHASEN ၏ လမ်းကြောင်း-Landfall-path တောင်ဘက်သို့ ၄၅ မိုင်ခန့် ကျဆင်းလာ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum